Ipleyiti eqhelekileyo enxibe i-chromium carbide, elungele ukusetyenziswa kwizicelo zokunxiba ngokubanzi ezibandakanya ifuthe eliphantsi ukuya kweliphakathi.
Ubungakanani bephepha: 1400 * 3400mm, 1500 * 3000mm, ezinye xa ziceliwe
WD1200 / WD1500 series lingonakali Resistant chromium khabhayithi WD1200 / WD1500 yi chromium khabhayithi edityanisiweyo khazi fusion ebotshelelwe kwipleyiti yesinyithi exhasayo enobulali. Idipozithi iye yafezekiswa kusetyenziswa i-arc welding. Ipleyiti yokunxiba ye-WD1200 / WD1500 ilungele isicelo esibandakanya ukukrwada kakhulu kunye nefuthe eliphantsi ukuya kweliphakathi. ● WD1200 / WD1500 uthotho: I-chromium ephezulu yokufaka iipleyiti zekhabhoni eziveliswe yi-arc welding emanzini; Zilungele izicelo ezibandakanya ukukrwada kakhulu kwaye ziphantsi ukuya ...
WD1600 series lingonakali Resistant chromium khabhayithi Wlay1600 yi chromium khabhayithi edityanisiweyo khazi fusion ebotshelelwe kwipleyiti yensimbi exhasayo. Idipozithi iye yafezekiswa kusetyenziswa i-arc welding. Ipleyiti yokunxiba ye-WD1600 ilungele isicelo esibandakanya ukurhabaxa okuphezulu kunye nefuthe eliphakathi ukuya kweliphezulu. ● WD1600 uthotho: Impact iipleyiti zokunxiba ezinganyangekiyo; Zilungele usetyenziso olubandakanya ukukrwada okuphezulu kunye nefuthe eliphakathi ukuya kweliphezulu. Iikhemikhali Ukuqina Sheet Ubungakanani Base Metal C, ...
Iipleyiti zeWD1800 zokunxiba
WD1800 series lingonakali Resistant chromium khabhayithi Wlay1800 entsonkothileyo khabhayithi edityanisiweyo khazi fusion ebotshelelwe kwipleyiti yensimbi exhasayo enobulali. Ipleyiti yokunxiba ye-WD1800 ilungele isicelo esibandakanya ukukrala okuphezulu kwiqondo lobushushu ukuya kuthi ga kwi-900 ℃. ● I-WD1800 uthotho: Iiplati ze-carbide zokunxiba; Kufanelekile kwizicelo ezibandakanya ukurhawuka okuphezulu kumaqondo obushushu aphakamileyo ukuya kuthi ga kwi-900 degree. Iikhemikhali Ukuqina Sheet Ubungakanani beSinyithi C-Cr-Nb-Mo-Ni ...
Iipleyiti zeWD2000 zokunxiba
Iiplati ze-carbide zokunxiba, oku kukuthobela imigaqo ye-BHP yokunxiba 3.
● WD1000 / WD1100 uthotho: Akukho iintanda weld iipleyiti ezigqunywe ngaphezulu; Imveliso eyahlukileyo e-China eyilelwe ukusebenza njengemigca yezindlu, kunye namacwecwe esilayidi kwizingqusho zentsimbi. Iikhemikhali Ubunzima bePhepha leSiseko seBetal C-Cr HRC50-55-Inqaku leSinyithi elinoBumnene: Umxholo weCarbon kunye neChromium uyahluka kwiipleyiti ezahlukeneyo.
Ukucwangciswa kwepleyiti yokutsiba imoto kuqhushumbe lesithambiso sokuhambisa inqanawa
ICone yokuhambisa umsesane wamalahle uMondli weTyhubhu yokuThoba iMbhobho
Isikhululo seNdawo yokuTshintshela yamalahle soLuhlu lweeBhakethi eLoader
Umhambisi weFan Casing Protect Cover ekhusela iVerical Vertical Mixer Hopper